Mat ho an'ny ankizy "Kintana amin'ny vanille" - Moi Mili
Home > Mat ho an'ny ankizy "Kintana amin'ny vanille"
Mat ho an'ny ankizy "Kintana amin'ny vanille"
Ny tsipika Moimili tany am-boalohany dia ny lafin-javatra tsara indrindra ho an'ny kintana volamena an'ny zanakay. Azo ampiasaina koa ho toy ny harona ahafahan'ilay zaza hilalao. Ny lamba vita amin'ny landihazo dia ny lafiny roa: ny lafiny lavanila misy kintana volamena dia azo ovaina ho malefaka beige, arakaraka ny tianao. Malalaka sy malefaka ny rehetra, ary ny kintana volamena dia manome voninahitra ny famoronana ataontsika.
Ny lambam-bolo malefaka natao ho an'ny ankizy dia manampy betsaka amin'ny teepee. Misaotra azy fa mahazo aina sy mahafinaritra ny mahafinaritra. Ny tsihy dia azo ovaina, vita amin'ny landy voajanahary ary feno insulasi matevina. Azo ampiasaina amin'ny efitra iray, zaridaina na amin'ny fitsangantsanganana iray. Mety amin'ny karazan-dalao rehetra, hatramin'ny fahazazany.
Habe 120x 120 cm, hatevina 3 cm.
Default Title - PLN 225.00 PLN